ऐरावती पर्यटनको गन्तव्य - Pradesh Today ऐरावती पर्यटनको गन्तव्य - Pradesh Today
ऐरावती पर्यटनको गन्तव्य
भदौ २४, २०७५ प्रदेश टुडे
हामीले प्राकृतिक रुपमा रहेका सम्पदाहरुलाई नै अहिले पर्यटनको गन्तब्य भन्दै आएका छौँ । आजभोलि धेरै पर्यटकहरु प्राकृतिक जैवीक विविधताको क्षेत्रमा भ्रमण गर्न रुचाउँछन् । यो मानवको स्वभाव पनि हो, विविधतामा रमाउने । नयाँ ठाउँ र नयाँ बस्तु हेर्न पर्यटकहरु मन पराउँछन् । पर्यटकलाई आकर्षणको गन्तब्य भनेको हामीसँग भएको प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधता, ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाहरु नै हुन् । प्रदेश नम्वर ५ मा पर्ने प्यूठान र अर्घाखाचीको सिमानामा ऐरावती पर्दछ । ऐरावती गाउँपालिका वडा नं. १ मा पर्ने ऐरावती धार्मिक पर्यटकीयस्थल हो । ऐरावतीमा पुग्ने पर्यटकहरुले धार्मिक मात्र नभएर जैविक विविधताको अध्ययन गर्न पाउँछन् । ऐरावती प्राकृतिक, जैविक र साँस्कृतिक हिसावले समेत मनोरम तीर्थस्थल हो । ऐरावती प्यूठान जिल्लाको स्वर्गद्वारीपछिको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मानिन्छ । ऐरावतीमा रहेको अमरेश्वर महादेवको मन्दिर ऐतिहासिक हो । जुन स्थानमा सतीदेवीको अंग पतन भएको मानिन्छ । ऐरावतीमा स्नान गर्नाले पुण्य कमाईने बैकुण्ठ धाम जान सकिने जनविश्वास छ । हिन्दूहरुको धार्मिक ग्रन्थ अनुसार सत्ययुगमा इन्द्र ऐरावत नामको हात्तीमा चढेर झिमरुक र माडीको संगमस्थलमा आएकोले त्यस ठाउँको नाम ऐरावती राखिएको विश्वास गरिन्छ । ऐरावतीमा आजभोलि पर्यटकहरुको लागि जैविक विविधता अध्यनको गन्तब्य बनेको छ । प्यूठान, अर्घाखाँची र दाङ जिल्लाका मानिसहरु वनभोज र मनोरञ्जनका लागि पनि ऐरावती पुग्ने गरेका छन् । भालुवाङ–प्यूठानको सडक खण्डको २४ किलोमीटरमा पर्ने बडडाँडादेखि ऐरावती करिव २२ किलोमीटरको दूरीमा पर्दछ । बडडाँडादेखि ग्रामीण कच्ची सडक भएकोले बर्षामा भने ऐरावती पुग्न अलि कठिन हुन्छ । बडडाँडा बजारबाट कास्कोट, हंसपुर दुमही हुँदै ऐरावती सममको यात्रामा वरपरको प्राकृतिक वातावरणले पर्यटक रमाउने गर्दछन् । बडडाँडाबाट जीपमा एक घन्टाको यात्रामा झिमरुक र माडी मिसिएको ठाउँ ऐरावती पुग्न सकिन्छ ।
बडडाँडाबाट ऐरावती जाँदा बाटोमा ऐतिहासिक ढुङ्गेगढी पर्दछ । ढुङ्गेगढी सरुमारानी गाउँपालिकाको वडा नं. ४ मा पर्दछ । बडडाँडा बजारबाट करिव आधाघण्टा पैदल यात्रामा पुगिने ढुङ्गेगढी भुरेटाकुरे राजाहरुको पालामा प्यूठानका भित्रीकोटे राजाहरु हिउँदको बेलामा शासन चलाउने थलो थियो । यो ठाउँ अहिले भग्नावशेष मात्र बाँकी छ । त्यहाँ भएका ऐतिहासिक महत्वका वस्तुहरु हराएका छन् । स्थानीय बासिन्दाहरुको संरक्षण हुन नसक्दा ढुङ्गेगढी दरबारका ढुङ्गासमेत स्थानीयहरुले प्रयोगमा ल्याएका छन् । तर पनि ढुङ्गेगढी पर्यटकहरुको लागि प्राकृतिक र ऐतिहासिक स्थल बनेको छ । ढुङ्गेगढी पुगेपछि जो कोही पर्यटकहरु एकैछिन सुन्य आकासमा हराएको भान हुन्छ । ढुङ्गेगढीको भग्नावशेष दरबार परिसरबाट अर्घाखाँचीको जलुकेका लौरी सिद्धारा, रातामाटा, लामाताल लगायत सुन्दर गाउँ र बस्तीहरु, राप्ती नदीको नागवेली आकार, प्यूठानको बाग्लेसालको समथर बस्ती दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । ढुङ्गेगढीबाट उत्तरतर्फ फर्केर हेर्ने हो भने दाङवाङ, धुवाङ, बरौला, पकलाको दक्षिण भू–भागका गाउँ र सुन्दर डाँडाकाडासमेत देख्न सकिन्छ । भालुवाङबाट ऐरावती पुग्नको लागि बडडाँडा नपुगेर पनि जान सकिन्छ । कतिपय पर्यटकहरु यही बाटो भएर जान रुचाउँछन् । भालुवाङ–प्यूठान सडकको १२ कि.मी.मा पर्ने दरबानबाट बाग्गेसाल हुँदै ऐरावती पुग्न सकिन्छ । दरबानदेखि ७ कि.मी.को यात्रामा बाग्गेसाल–लामाताल–कालिवन हुँदै झिलिवाङसम्म आफ्नो साधन हुनेले मोटरमा पुग्न सकिन्छ । झिलिवनबाट करिब दुई घण्टाको पैदल यात्रामा ऐरावती पुगिन्छ ।
ऐरावती पुग्ने पर्यटक अथवा अन्य मानिसहरुले पनि नौमुरेको बारेमा चासोका साथ अध्ययन गर्दछन् । नौमुरे नेपालको बहुउद्देश्यीय परियोजना मानिन्छ । यो परियोजना भनेको, माडी र भिमरुकको पानीलाई नौमुरेमा ९० मिटर अग्लो बाँध बाँधी दुई सय ४५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने हो । विद्युत गृहबाट निस्किएको पानीलाई अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंंगा नगरपालिकामा पर्ने लापे माथिको पहाड, लौरी सिताराको पहाड र धानखोला नजिकका पहाडमुनी सुरुङमार्ग बनाएर राप्तीको पानी सुराइखोलाबाट भारत पु¥याउने योजना भारतको छ ।
आजभोलि अर्घाखाँची र प्यूठान पनि सडक सञ्जाल जोडिएको छ । बुटवलतिरबाट सुपादेउराली दर्शन गर्न जाने धार्मिक पर्यटकहरु मोटर मार्गबाट नै ऐरावती पुग्न सक्दछन् । अर्घाखाँचीको ठाडा–जुकेना–सानाढुमरे हुँदै प्यूठानको माझीदमारसम्म हिउँदमा जीप चल्न थालेको छ । धुलो, धुँवा र प्रदूषणयुक्त सहरी वातावरणबाट केही दिनलाई भने पनि आनन्द लिन धेरै पर्यटकहरु आफ्नो भ्रमण जैविक विविधता भएको क्षेत्रमा जान रुचाउँछन् । ऐरावती क्षेत्रको भ्रमणले पर्यटकहरुलाई केवल धार्मिक र ऐतिहासिक मात्र नभएर जैविक विविधता र पर्यावरणसम्बन्धी धेरै जानकारी लिन सक्दछन् । ऐरावतीमा मिसिन आउने झिमरुक र माडी खोलाको बारेमा अध्ययन गर्न सक्दछन् । आफ्नो भ्रमण अवधि लम्बाउन चाहने पर्यटकहरुले माडी र झिमरुकखोला किनारमा रहेका गाउँबस्ती र जैविक विविधतामा रहेका वन जगंलको बारेमा अध्ययन गर्न सक्दछन् । रोल्पा–बाग्लुङको सीमानामा पर्ने कालाशेषबाट बग्दै आउँने लुङग्रीखुङग्री खोलाको पानी र रोल्पाकै राँकको जायाचौरबाट बग्दै आएको माडी खोला चतुर्भूजमा मिसिएर माडिखोला भएर बग्दछ । प्यूठान जिल्लाको अर्खा, रजवार र गौमुखीबाट मुहान भएको झिमरुक खोलामा गर्दन खोला, छोपेखोला, खप्रङखोला आदि स–साना खोला नालाहरु मिसिएर ऐरावतीमा माडी र झिमरुक मिसिन्छ । ऐरावतीको दोमहिबाट राप्ती नदीको नामाकरण हुन्छ । ऐरावतीको महत्व झिमरुक र माडीको संगमस्थल मात्र छैन । ऐरावतीले झिमरुक र माडी नदीलाई मात्र जोडेको छैन, सल्लीकोट, डावर, सिरसेनी, धाबोट, कोलबाोट, बेलबोट र दमाराजस्ता गाउँ र बस्तीहरुलाई पनि जोडेको छ । प्यूठानको दाङवाङ र हंसपुर तथा अर्घाखाँचीको जलुके ऐरावतीसँगै जोडिएको रमणीय गाउँ छन ।
प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण ऐरावती रमणीय त छँदैछ । धार्मिक, साँस्कृतिक, एवं पर्यटकीय दृष्टिकोणले ऐरावती उत्तिकै महत्वपूर्ण पनि छ । प्रसिद्ध शीला अर्थात् चट्टानमा निर्मित ऐरावत हात्ती र गणेशका सुढको आकृतिले ऐरावतीको महत्व बढाएको छ । माडी र भिमरुकको संगमस्थलमा ठूलो पत्थरमा हात्तीको आकृति देख्न पाउँदा ऐरावती पुग्ने पर्यटकहरु आश्चर्य चकित हुन्छन् । नदीमा पौडी खेल्ने सीप भएका पौडीवाज पर्यटकहरुका लागि ऐरावती थप रमणीय स्थल बन्दछ । सलसल पानीमा खेलिरहेका माछासँग पौडी खेलेको दृश्यको सेल्फी लिनेहरुको पनि कमि हुदैन । माघे सक्रान्तीमा पुग्ने पर्यटकले त मेलामा प्रदर्शन गरिने स्थानीय नाचहरु, मारुनी, सोरठी, भजनसमेत देख्न सक्दछन ।
ऐरावतीमा पर्यटकहरुको लागि बस्न खान कुनै होटल छैन । ऐरावतीको चारैतिर उच्च श्रृंखलाहरुको डाँडाकाडाका गाउँ र बस्तीमा मानिसको बसोवास छ । ऐरावती पुगिसकेपछि कतिपय पर्यटक डाँडाकाडाका बस्तीहरुमा भ्रमण गर्न रुचाउँछन् । गाउँमा पेइङ गेष्टको रुपमा रात बिताउने गर्दछन् । ऐरावती क्षेत्रमा गाउँमा बसोबास गर्ने जनजातिहरुको आफ्नै रहनसहन, भेषभूषासहितको जीवनशैली छ । दाङवाङको शिरसेनीका गुरुङ समुदायको ल्होसार पर्व र घाटुनाचले ऐरावती पुग्ने जोसुकै पर्यटकहरुलाई नौलो अनुभूति हुन्छ । तर घाटु नाच हेर्न भने उनीहरुको पर्वमा नै पुग्नु पर्दछ । सहर बजारबाट भ्रमणमा पुगेका पर्यटकलाई ती सबै परिवेश थप अध्ययनको बिषय बन्दछ । बेला–बेलामा चर्चामा आउने नौमुरे परियोजनाको बाँध ऐरावतीभन्दा दुई किलोमीटर नजिक पर्दछ । ऐरावती पुग्ने पर्यटक अथवा अन्य मानिसहरुले पनि नौमुरेको बारेमा चासोका साथ अध्ययन गर्दछन् । नौमुरे नेपालको बहुउद्देश्यीय परियोजना मानिन्छ । यो परियोजना भनेको, माडी र भिमरुकको पानीलाई नौमुरेमा ९० मिटर अग्लो बाँध बाँधी दुई सय ४५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने हो । विद्युत गृहबाट निस्किएको पानीलाई अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंंगा नगरपालिकामा पर्ने लापे माथिको पहाड, लौरी सिताराको पहाड र धानखोला नजिकका पहाडमुनी सुरुङमार्ग बनाएर राप्तीको पानी सुराइखोलाबाट भारत पु¥याउने योजना भारतको छ । यो परियोजना सुरु भयो भने माडी र झिमरुक दुबैखोलामा करिब २० किलोमीटरसम्म डुबान अर्थात पानीको ताल हुन्छ । झिमरुक खोलातिर दाङवाङको छेडा, सिमपानी, चाक्लीघाट, पतेरी, जुडा हुँदै साझबोटसम्म पानीको ताल बन्ने छ । त्यसैगरी माडी खोलामा दुमई लामिदमार, मछेडी, चिदीदमार, खारापकला, सुजीनपुर, आहाले, पनाहा, चुना, ब्योरे, बैके, सिमलचौर र देविस्थानको जस्पुरसम्म डुबान अर्थात पानीको ताल बन्ने छ । अर्घाखाँची जिल्लाको भूगोलमा जलुके, धनचौर, नुवाकोट र खिल्जीका झिमरुकतिर पर्ने भागहरु डुवानमा पर्नेछन् । प्यूठान र अर्घाखाँचीका चार हजार घरधुरी डुबानमा पर्नेछन् । डुबानमा चारसय हेक्टर जमिन आवादी पर्नेछ । ऐरावती पुग्दा रुचि भएका पर्यटकहरुको लागि नौमुले परियोजना स्थलगत अध्ययन गर्न समेत सक्नेछन् । जैविक विविधताको अध्ययन गर्ने पर्यटकहरुका लागि ऐरावतीमा माडी र झिमरुक खोला किनारका बस्ती र वन जंगलहरु अध्ययनका विषय बन्न सक्दछन् । त्यहाँ छोटो दूरीमा धेरै भौगोलिक संरचनाहरु पाइन्छ । भिन्न भिन्न हावापानी पहाडी श्रृंखलाका भीर, पहरा, गल्छी र पातलो मानवबस्तीहरु छन् । ऐरावती वरपर उत्तर–दक्षिण दुबैतिर फर्केका डाँडाका पाखाहरु, एकातिर घामलाग्ने र अर्कोतिर ओसिलो हुने धेरै ठाउँहरु छन् । यी क्षेत्रमा जैविक विविधताको अनुभव गर्न सकिन्छ । पहिलो पटक ऐरावतीको क्षेत्रमा पुगेको पर्यटक ती सबै दृष्य देख्दा रमाउँछ । आफ्नो क्यामारामा प्राकृतिक दृष्यलाई कैद गर्दै एकैछिन भएपनि प्रकृतिसँग भावनात्मक सम्बन्ध राख्न खोज्दछ । ऐरावतीको भूगोल सुन्दर छ । पर्यटकहरुलाई अध्ययन गर्ने धेरै क्षेत्रहरु छन् । तर भरपर्दो सडक यातायात छैन । सडक यातायात खुल्नुभन्दा पहिले दाङवाङ, वरौला, पकला र धुवाङ वरपरका गाउँलेहरुले ऐरावती हुँदै सलिकोट भएर नुन र तेल बोक्ने गोरेटो बाटोसमेत नासिन थालेका छन् । ऐरावतीलाई पर्यटनको विकास गर्न अब स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिहरु लाग्नुपर्दछ । गाउँमा पर्यटक भित्र्याउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दछ । कम्तीमा गाउँमा पुग्ने पर्यटकहरुको लागि खाना बस्नको लागि होटलको सुविधा हुन जरुरी छ । ऐरावती क्षेत्रमा पर्यटन भित्र्याउन अब गाउँपालिकाले वृहत् योजनासहित सडक, स्वाथ्य चौकी, सञ्चार र सुरक्षाको लागि प्रहरी चौकीसमेत स्थापना गर्दै जानुपर्दछ । गाउँघरमा सरसफाईको वातावरण दिलाउँदै गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने सोचको विकास गर्न जरुरी छ । होमस्टे सञ्चालन गर्न त्यति सजिलो भने छैन । धेरै जिल्लामा स्थान र जनजातीहरुको नामसँग जोडिएर होमस्टे सञ्चालन आएका छन् । सरकारले होमस्टे सञ्चालन गर्नका लागि कार्यविधि २०६७ ल्याएको छ । कार्यविधि ऐनले होमस्टे सञ्चालन गर्नको लागि के–के प्रावधान पु¥याउनुपर्दछ भन्ने कुरा बुझाइ दिएको छ । होमस्टेले ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय जनसमुदायमा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना हुन्छ । गाउँमा स्वरोजगारका अवसरले आम्दानीका अवसरहरु बढ्छ । आम्दानीले मानिसको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने अवसर सिर्जना हुन्छ । होमस्टे भन्नाले पर्यटकलाई आवास, खाना र अन्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले आफ्नै घर समुदायमा निजी वा सामूहिक रुपमा सञ्चालन गरिएको सेवा हो । यसको उद्देश्य होमस्टे सञ्चालन गरी पर्यटन क्षेत्रको प्रतिफल ग्रामीण समुदायमा पु¥याउने हो । अर्कोतर्फ होमस्टे सञ्चालन गरी ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरुलाई पर्यटन सेवामा सहभागी गराउने पनि हो । जुन कारणले गर्दा ग्रामीण समुदायको आयश्रोत बढ्दै जान्छ र जीवनस्तरमा सुधार आउँछ । होमस्टे सञ्चालन गरी पर्यटकहरुलाई ग्रामीण जनजीवन साथै संस्कृतिका बारेमा जानकारी दिन सकिन्छ । होमस्टे आवास मात्र नभएर पर्यटकहरुलाई रितिरिवाज, कला, संस्कृति र रहनसहनको बारेमा जानकारी दिन सकिन्छ । होमस्टे सञ्चालन भएका ग्रामीण क्षेत्रमा साँस्कृतिक कार्यक्रममा गाउँमा आएका पर्यटकहरुलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । गाउँमा पुग्ने पर्यटकहरुलाइ जंगल ट्रेक, इको ट्रेक तथा दृश्यावलोकनको कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो बाहेक होमस्टेले स्थानीय साँस्कृतिक नाचगान तथा फुलमालाका साथ पर्यटकको स्वागत गर्न सकिन्छ । होमस्टे सञ्चालन भएका गाउँमा जाने पर्यटकहरुलाई स्थानीय कृषि, घरेलु तथा हस्तकला प्रविधिमा सहभागी गराई पर्यटक तथा स्थानीय जनताबीच जीवनशैली, कला संस्कृति आदि विषयमा अनुभव तथा ज्ञानको आदानप्रदान गराउन सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका पर्यटनस्थलमा पुगेपछि त्यहाँ पुग्ने पर्यटकहरुले केही न केही त्यस क्षेत्रको चिनो स्वरुप वस्तुहरु ल्याउन चाहन्छन् । ऐरावती क्षेत्रलाई ग्रामीण पर्यटनको विकास गर्नको लागि स्थानीय बासिन्दाहरुमा कला र सीपको विकास हुन जरुरी छ । जुन सीपले आयआर्जन गर्न सकोस्, अर्थात उनीहरुको सीपले उत्पादन गरेका वस्तुहरु त्यहाँ जाने पर्यटकले किन्न सकून् । अनिमात्र हुन्छ गाउँमा पर्यटनको विकास ।